Maciej Kuciara iyo himiladiisa cajiibka ah ee "Ilaaha Masar" | Abuurista khadka tooska ah
Maciej Kuciara lagama yaabo inuu u ekaado wax marka hore, laakiin haddii aan ku bilowno inaan dhahno waa farshaxan ka soo shaqeeyay ciyaaraha fiidiyowga sida Crysis, The last of Us or Halo 4, iyo sidoo kale filimada sida X Men iyo Ilaaliyaha GalaxyXaqiiqdii waxaad bilaabi doontaa inaad tixgeliso magaciisa.
Kuciara ayaa noo keentay khadadkaan a sawir tayo sare leh sida ay tahay 'Ilaaha Masar', waa shaqo inagu qaadaysa ka hor ilbaxnimo Masaari ah oo qayb ka noqon karta Dune ama muuqaal laga soo duubay filimka Sheekada 'Neverending Story' markii uu Atreyu soo dhaafay labadaas taallo oo waaweyn.
Shaqo tayo gaar ah leh oo gunta hoose aan ku aragno a buur ay ku taal dhisme weyn kaas oo iftiin toosan oo toos ahi uga soo baxo xagga xiddigaha iyo cirka.
Kuciara waxay la shaqeysay macaamiisha sida ay yihiin Crytek, Disney, Dreamworks ama Columbia Pictures iyo kuwo kale. Sawir qaade tayo sare leh laakiin yaa mararka qaar dareemi kara magacyada amaahda ee filimadaas halkaas oo farshaxankiisa muuqaalka ah uu ka sameeyay qeyb ka mid ah sheekooyinka iyo mala awaalka ay soo jeedinayaan, sida ilaaliyaha Galaxy-ka ee aan horey u sugeynay. qayb.
Sawirkaan oo la yiraahdo "God of Egypt" sidoo kale wuxuu ina geyn doonaa Stargate, a aqoonyahanno saynis-fi ah oo dhashay 1994 gacanta Dean Devlin iyo Roland Emmerich. Saxarahaas iyo xiddigahaas waxay ku dhex milmeen qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Stargate, sidaa darteed waxaa jira dareenno dhowr ah oo laga helay qaybtan farshaxanimada ah
Kuciara ayaa leh facebookaga e Instagram markaa waad la socon kartaa shaqadooda. Sidoo kale Behance y web kuwa waxaad ku leedahay astaan ​​furan shabakadan bulshada ujeedka at fanaaniinta. Shaqo weyn in la raaco sida lamaanahan reer Valencian taas oo u shaqeysa macaamiisha sida 20th Century Fox.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » 'Ilaaha Masar' by Maciej Kuciara
Nalalka xariifka ah oo dhirta u oggolaanaya inay ku soo baxaan gudaha biyo la'aan ama qorrax toos ah